बन्दका कारण बिहानैदेखि उपत्यकासहित १५ जिल्ला ठप्प, कहाँ-कहाँ भयो विस्फोट र आगजनी ? — Sanchar Kendra
१एमालेलाई हराएर एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा जित्यो पहिलो मेयर
२ओलीको गृहनगर दमकको ताजा मतपरिणाम-राप्रपा अघिअघि, एमाले पछिपछि, मतान्तरसहित
३टीकापुरमा रेशम चौधरीको पार्टीले जित्यो मेयर
४एकाएक कसरी घट्यो बालेन शाहको १० हजार मत ? प्रेस ब्रिफिङमा चिप्लिए…
५भरतपुरमा रेनु दाहाल २ हजार वढि मतले अगाडि
६एमालेबाट आमा छोरी विजयी
७संरचनात्मक जटिलता भत्काउन क्रान्तिकारी छलाङ मार्न डा.भट्टराईको सुझाव
८३० वर्षदेखि जेलमा रहेका राजीव गान्धीको हत्यारा रिहा
९मतगणनामा खटिन किन तयार छैनन् कर्मचारी?
१०दोधाराचाँदनीमा एमाले विजयी, उपमेयरमा कांग्रेस
११मतपेटिकाको सिल चुँडिएको पाइएपछि गोरखाकाे पालुङटार नगरपालिकाको मतगणना स्थगित
१२२७,४३८ मतगणना हुँदा भरतपुरमा रेनु १७१२ मतको अग्रता
बन्दका कारण बिहानैदेखि उपत्यकासहित १५ जिल्ला ठप्प, कहाँ-कहाँ भयो विस्फोट र आगजनी ?
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आव्हान गरेको बन्दका कारण उपत्यकासहित १५ जिल्ला विहानैबाट ठप्प भएका छन् । नेता कार्यकर्तामाथिको दमन, धरपकड र ज्यादतीबिरुद्ध भन्दै नेकपाले बुधबार उपत्यकासहित १५ जिल्ला बन्द आव्हान गरेको हो । बन्दका कारण बिहानी सेवाका कलेज, स्कुलहरु ठप्प छन् भने लामो तथा छोटो दूरीको यातयात समेत चलेको छैन । सधै बिहानैदेखि सवारीसाधनको चाप हुने उपत्यकाआ ३ जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरपनि बन्दको दिन सुनसान बनेको छ । त्यस्तै रामेछाप र दोलखा, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन र मकवानपुर बन्द भएका छन् । यसअघि बन्दको पूर्वसन्ध्यामा ११ वटै जिल्लामा नेकपाका कार्यकर्ताहरुले मशाल जुलुस निकालेका थिए ।
बन्दको क्रममा मकवानपुर गएराती र आज बुधबार बिहान दुईस्थानमा गाडी जलाइएको छ । गाडीमा रहेकालाई ओरालेर गाडी जलाएको प्रहरीले जनाएको छ । हेटौंडाका ठाउँ ठाउँमा संकासपद वस्तु भेटिएको छ । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ फाखेल हुमाने मन्ज्याङमा निजी कारमा आगजनी भएकाे छ । हेटौंडाबाट काठमाण्डौ तर्फ जाँदै गरेको बा १४ च ८२३४ नम्बरको कारमा आगजनी भएको हो । कारमा चढेका दुईजनालाई ओरालेर आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक यज्ञ प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । कार पूर्ण रुपमा जलेको छ । यसैगरी मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ ज्यामिरे खरंङ्गामा बा ५ ख १७ ३९ नम्बरको ट्रकमा आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवापनुरका प्रहरी उपरिक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताएका छन् ।
ज्यामिरेमा गुढीरहेको ट्रकमा अज्ञात समुहले पेट्रोल बम टाढैबाट प्रहार गरेका थिए । पेट्रोल वम प्रहारबाट ट्रकको अगाडीको भाग मात्र जलेको उनले बताए । बन्दको क्रममामा हेटौंडाको चार स्थानमा बम भेटिएको छ । बम लेखिएका संकासपद् वस्तु हेटौंडाको पारिजातपथ, थानाभर्याङ, चौकिटोल र हुप्राचौर क्वीक २० नजीकै संकासपद् वस्तु राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । संकासपद् वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरिसकेको छ । सेनाले संकासपद् वस्तु डिस्पोज गर्दा ठुलो आवाज आएको स्थानीय वासिन्दाहरुले बताएका छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापा रहेको एनसेलका ३ टावरमा आगजनी भएको छ । मंगलबार साँझ भद्रपुर कमल गाउँपालिकामा रहेको एनसेल टावरमा अज्ञात समुहले आगजनी गरेको छ भने दमकमा रहेको एनसेल टावरमा बम बिस्फोट भएको छ । राति एक्कासी एनसेलको टावरमा आगजनी भएपछि अहिले घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यस्तै काभ्रेको बनेपा नगरपालिकास्थित बजार क्षेत्रमा मंगलबार राति बम विस्फोट भएको छ ।
बनेपा बजारको उग्रेश्वर महादेव मन्दिर नजिकै शक्तिशाली बम बिस्फोट भएको हो । बम पड्केको आवाजले स्थानीयबासी त्रसित भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी जयराज सापकोटाले विस्फोटबारे जानकारी आएको बताउँदै प्रहरी टोली पठाइसकिएको बताए। विस्फोटबाट भएको क्षतिको विवरण आइसकेको छैन । चर्चित जनवादी कलाकार समेत रहेका लामालाई प्रहरीले साउन ४ गते काठमाडौंँको काँडाघारीमा सुतिरहेको अवस्थामा मध्यराति गिरफ्तार गरेपछि बन्द आव्हान गरिएको हो । एनसेल बिस्फोटमा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरले पुर्पक्षको लागि उनलाई जेल चलाउन गरेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–१० को वडा कार्यालयमा आगजनी भएको छ । वडा कार्यालयमा नचिनेका मानिसको समूहले आगजनी गरेको हो । आगजनीबाट कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात जलेका छन् । यस्तै भौतिक क्षति भएको छ । यसैगरी नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–१ को कार्यालयमा नचिनेका मानिसको समूहले मंगलबार राति बम बिस्फोट गराएको छ । बिस्फोटका कारण कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । यस्तै रौतहटको चन्दपुर नगरपालिकाको गैँडाटार वडा कार्यालयमा मंगलबार राति आगजनी भएको छ । आगजनीका कारण कार्यालयमा क्षति भएको छ । आगजनी तथा बिस्फोटको जिम्मा कसैले लिएका छैन तर बन्द सफल बनाउने नेकपाले आगजनी गरेको हुनसक्ने नेकपाको अनुमान छ ।
यस्तै उता झापाको ३ वटा स्थानमा एनसेल टावरमाथि एकैपटक आक्रमण भएको छ । जिल्लाको भद्रपुर र कमल गाउँपालिकामा रहेको एनसेल टावरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ भने दमकमा रहेको एनसेल टावरमा बम बिष्फोट भएको छ । एक्कासि एनसेलको टावरमा आगजनी भएपछि अहिले घटनास्थलमा बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार यसअघि पटकपटक नेकपाले एनसेलले कर नतिरेको भन्दै टावरमा आक्रमण गरेका कारण यसपटक पनि नेकपाले गरेको हुन सक्ने प्रहरी अनुमान छ ।
एमालेलाई हराएर एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा जित्यो पहिलो मेयर
संरचनात्मक जटिलता भत्काउन क्रान्तिकारी छलाङ मार्न डा.भट्टराईको सुझाव
३० वर्षदेखि जेलमा रहेका राजीव गान्धीको हत्यारा रिहा
प्रस्तावित राजदूत तुलाधर : चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न रुससँगकाे सम्बन्ध आवश्यक
आज सुनको भाउ ९ सय रुपैयाँले घट्यो
भरतपुरमा चम्किदै रेनु, मतान्तर ह्वात्तै बढाइन, कति मतले पछि छन् विजय ?
अहिलेसम्म यी स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक, हेर्नुस् कहाँ कसले जित्यो ?